Haruki Murakami's Best Books | Zvazvino Zvinyorwa
Mwanakomana wevaviri vanoda mabhuku, Haruki Murakami (Kyoto, 1949) anogona kudaro Munyori weJapan ane mukurumbira mhiri kwemakungwa. Akafurirwa kweakawanda ehupenyu hwake nehunyanzvi netsika yekuMadokero, chikonzero chinomusiyanisa kubva kune vamwe vanyori vechiJapan uye chakazomupa mutongo wekutsoropodzwa kanopfuura kamwe netsika dzenyika yake, Murakami anofamba mumabasa angave rakakamurwa pakati peicho chaicho uye fungidziro, kuunganidza mafiro akaumbwa nechokwadi chekuti zviito zvese nezviitiko zvinoumba mugumo mumwe. Izvi Mabhuku akanakisa naHaruki Murakami Ivo vanotibatsira kuti tizvinyurise isu pachedu munyika yemumiriri wekusingaperi weNobel Prize mumabhuku uyo ​​gore rino anoburitsa yake nyowani nyowani kuSpain, Urayai mutungamiri.
1 Kafka pamhenderekedzo
4 Nhoroondo yeshiri iyo inotenderera nyika
5 Kuguma kwenyika uye nyika ine hutsinye
6 Sputnik, mudiwa wangu
7 Maodzanyemba emuganhu, kumadokero kwezuva
8 Makore ekufambira kwemukomana asina ruvara
Kafka pamhenderekedzo (MAXI)
Yakatumidzwa zita "Rakanakisa Bhuku regore 2005" neThe New York Times, Kafka pamhenderekedzo inofungidzirwa nevazhinji se Haruki Murakami bhuku rakanakisa. Mumapeji ese ebasa, nyaya mbiri dzinosangana, kuenda kumberi uye kumashure: iro remukomana Kafka Tamura, zita raanowana kana achisiya imba yemhuri yakatarwa nekusavapo kwamai vake nehanzvadzi yake, naSatoru Nakata, murume akwegura uyo mushure metsaona yakatambura muhudiki, anokudziridza kugona kuziva kwekutaura nekitsi. Akapihwa fungidziro senge mamwe mashoma mabasa nemunyori wechiJapan, Kafka paMahombekombe inofadza njere uye kuratidzwa kwakakwana kwemasimba ekumadokero nekumabvazuva ayo Murakami anoronga nekugona kukuru.
1Q84. Mabhuku 1 ne2 (MAXI)
Yakabudiswa pakati pa2009 na2010 mu mavhoriyamu matatu akasiyana, 1Q84 inoteedzera zita rekuti George Orwell anozivikanwa 1984, ichitsiva 9 iyo mukunyora kwechiJapane yakaenzana nemavara Q, ese mahemofoni uye akadanwa sa «kyu». Iyo inoverengeka yakaiswa munyika yedystopi uye mumavhoriyamu ayo maviri ekutanga inopindirana nenyaya uye pfungwa dzekuona kwevamiriri vayo vaviri: Aomame, mudzidzisi wejimnastics, uye Tengo, mudzidzisi wemasvomhu, vese vari vaviri shamwari dzehucheche uye makumi matatu-mamwe mazuva akanyudzwa mune chokwadi chavanoona zvakasiyana nevamwe. Yakazadzwa nezvakawanda zvinongedzera kuWestern art netsika, 1Q84 yakava hit apo tengesa makopi miriyoni mumwedzi mumwe chete.
Uye 1987, Tokyo blues yakaburitswa ichiita kuti Murakami izivikanwe pasi rese. Iyo nyaya inoita senge yakapusa asi yakatakurwa neyakaomarara zvakafanana inoratidzira mavara ayo uye mavambo ayo anokonzereswa panguva yekufamba nendege umo protagonist, Toru Watanabe, mukuru wemakore makumi matatu nematatu, anoteerera rwiyo rweBeatles, Matanda eNorway, izvo zvinokutora kuti udzokere mukuyaruka. Nguva yaakasangana naNaoko asina kugadzikana, musikana weshamwari yake yepamoyo Kizudi uyo kunyarara kwake kwakaenzana nemvura dzese dzainaya pachiso chePasi. Kushamwaridzana kwakachena kumabvazuva kunozununguswa nemitambo yekumadokero.
Nhoroondo yeshiri iyo inotenderera nyika
Chronicle yeshiri iyo ...
Imwe yenyaya dzaMurakami dzinonyungudika zvakanyanya iwo mafungiro echokwadi uye surrealism yakaburitswa muJapan muna 1994 uye gore gare gare mune dzimwe nyika. Nhau inouya mushure mekufunga kwaTooru Okada kusiya femu yemutemo kwaanoshanda, panguva iyoyo anogashira runhare kubva kumukadzi asinganzwisisike. Kubva ipapo zvichienda mberi, bhuruu rebhuru rinowonekwa pachiso chemunhu mukuru, zvichiratidza kubatana kwake nehuremu hunotanga kuzadza hupenyu hwake. Imwe yeanoshamisa mavara anomutsa akawanda asina kugadziriswa makakatanwa ayo Tooru akadhonzera mberi kwemakore.
Ungada here kuverenga Nhoroondo yeshiri iyo inotenderera nyika?
Kuguma kwenyika uye nyika ine hutsinye
Kuguma kwenyika uye ...
Kunyangwe yaizove imwe Murakami classic nekufamba kwenguva, Kuguma kwenyika uye nyika ine hutsinye yakaramba iine makore sekushomeka iyo musimboti wayo inoita kuti ive yeanoshanda emunyori. Yakakamurwa kuita nyika mbiri uye yakafanana nyaya, iri bhuku rakaburitswa muna 1985 rakaiswa muguta rakakombwa nemasvingo rinomiririra "kuguma kwenyika" kunoonekwa kuburikidza neziso remunhu asina mumvuri protagonist, uye ramangwana Tokyo, kana nyika yakatukwa, uko musayendisiti wemakomputa anoshandira nzvimbo inotarisira kutengesa ruzivo. Dystopia kwete kure kwazvo kubva kuchokwadi chedu.
Sputnik, mudiwa wangu
Sputnik rudo rwangu (MAXI)
Zvinoshamisa uye zvinosuruvarisa, Sputnik, mudiwa wangu inogona kunge yakanyatsofuridzira akateedzana seakarasika. Mutambo wakataurwa nemudzidzisi wepuraimari anonzi K, ane shamwari yepamoyo uye kupwanya, Sumire, munyori anofarira anoverengera anotanga rwendo nemukadzi ane makore gumi nematanhatu mukuru wake, Miû. Mushure mezororo pachitsuwa cheGreek, Sumire anonyangarika, ndosaka Miû achitaurirana naK asingazive kuti, zvimwe, kutsakatika kwemukadzi mudiki kuri nekuda kwezvikonzero zvemafizikisi, kune chokwadi chekubatana neimwe divi kwaasingakwanise kudzoka. .
Maodzanyemba emuganhu, kumadokero kwezuva
Maodzanyemba emuganhu, ku ...
Rimwe remabhuku andinofarira aMurakami ndomumwe weanonyanya kufarira munyori. Yakapihwa yakasarudzika kufa uye kushushikana, ino novel inotora zita rayo kubva murwiyo rwaNat King Cole inotizivisa kunaHajime, murume akaroora ane vanasikana vaviri uye muridzi weiyo yakabudirira jazha bar ane hupenyu hwakashanduka zvachose mushure mekuonekwa. Shimamoto, a shamwari yehucheche yaakapa kuti arasike uye ndiani dutu muhupenyu hwake, inopisa seinoparadza.
Usarega kuverenga Maodzanyemba emuganhu, kumadokero kwezuva.
Makore ekufambira kwemukomana asina ruvara
Makore e ...
Yakabudiswa muna 2013, ino ino inova «classic murakami»Nekutaura nyaya yaTsukuru Tazaki, mainjiniya ezvitima uyo, zvinoshamisika, anongovatarisa vachidarika. Yakadzika muhupenyu hwega, hupenyu hwemurume uyu ane makore makumi matatu nematanhatu anoshanduka paanosangana naSara, hunhu hunomuyeuchidza nezvechitsauko muhupenyu hwake chakaitika makore gumi nematanhatu apfuura: iyo nguva apo boka rake reshamwari rakangoerekana ramira kutaura iye uye pasina chikonzero chiri pachena.
Ungada here kuverenga Makore ekufambira kwemukomana asina ruvara?
Chii, mukufunga kwako, Mabhuku akanakisa aHaruki Murakami?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku akanakisa aHaruki Murakami
samantha karla akadaro
Aaah yes murakami. Anobata chibharo uyo anofungidzira nezvevakadzi vese mavara mune ake »» anoshanda »» anonyengedza pseudo porno. Chokwadi. Ngatione mabasa ake akanakisa xd
Pindura Samantha karla